Waa Maxay Mode dhaqsaha The Of Travel In Europe? | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa Maxay Mode dhaqsaha The Of Travel In Europe?
Belgium safarka tareenka, safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, Tareen Travel Holland, Tareen Travel The Netherlands, safarka tareen UK, safarka Europe
wax ugu horeysay dadka qabaa marka aad la yaabi Waa maxay qaabka ugu dhaqsiyaha badnaa ee safarka ee Europe ayaa u duulay. Laakiin waxaan ku raacsanayn lahaa! Inkasta oo duulaya dhabta ah waxaa laga yaabaa in si dhaqso ah, waxaa jira waxba gaabis badan garoomada in la xadido waqtiga safarka dhab idiin badbaadiyo. Waxa kale oo ay kor u dhamaado isagoo ka qaalisan marka aad qodob ee drive ay ku qaadato si aad u hesho in garoomada diyaaradaha, sidoo kale! Ha xitaa aad noo bilaabay on the wadooyinka cidhiidhiga ah, boosteejada humongous, khadadka khobaro si aad u hubiso in oo dhex maraya ammaanka, iyo Alaabtoodii dib u dhac sheegashada marka ay yimaadaanba oo dhan ku dar ilaa!
Waxaan u maleynayaa in dhammaan waxaan ku heshiin karin in safarka baska waa no-no! Gaar ahaan marka aad u ekaysiinnaa in raaxada aad ka heli tareenada. Ma ku qanacsan weli ku saabsan Waa maxay qaabka ugu dhaqsiyaha badnaa ee safarka ee Yurub weli? akhri!
Waa maxay qaabka ugu dhaqsiyaha badnaa ee safarka ee Brussels:
Habka ugu fiican ee safarka ka Brussels waa tareen. Tigidhada la dalban karaa iyada oo loo marayo Save A Tareen daqiiqo gudahood aan ajuurada qarsoon. Brussels waa meel soo jiidasho leh naqshadaha cajiib ah iyo taariikhda xiiso buuxiyey oo jidka maraba kasta oo ka muqdeen.
Brussels si dhab ah uu leeyahay qof walba wax u bixiyaa oo qabatooyin Yurub sida farshaxanka iyo naqshadaha garab ka badan soo jiidashada aan caadi ahayn. Ha booqan Brussels haddii aad ku jirto cunto sida baradhada shiilan ee, aleelada, iyo biirka ugu dhakhsaha badan doono in aad islana. Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan Brussels waa in ay sidoo kale super la heli karo tareen iyo si fudud oo si deg deg ah waxaad booqan kartaa magaalo kale ee Europe. Waxaan sameeyey xisaab aad u 😉
Ku socda ka soo Brussels si Paris
Safarku wuxuu ka Brussels si Paris in la buuxiyaa kartaa tareen in ka yar 1:30 h. tareenada noqnoqda toos tagaan Brussels yimaadaan Paris’ Gare du Nord maalintii oo dhan. Duulimaadyada ka Brussels si Paris’ Charles de Gaulle Airport wareegaan 5 saacadood markii jeer garoonka sugidda ayaa la tixgeliyaa.
Tabobaro From Brussels si Paris Time – 1:22 h
Ku socda ka soo Brussels London
Safarku wuxuu ka Brussels London in la buuxiyaa kartaa in ka badan 2 saacadood. Habka ugu dhaqsiyaha badan ee gaadiidka waa safar tareen, tareenada noqnoqda Eurostar toos timaado saldhiga St Pancras London ee maalintii oo dhan. Duulimaadyada ka Brussels Garoonka Heathrow London wareegaan 5 saacadood markii jeer garoonka sugidda waxaa loo tixgeliyaa.
Tabobaro From Brussels London Time – 2:18 h
Ku socda ka soo Brussels si Amsterdam
safrida ka Brussels si Amsterdam qaadataa yar 2 saacadood tareen. tareenada noqnoqda toos yimaadaan Central Station Amsterdam ee maalintii oo dhan. Duulimaadyada ka Brussels si Schiphol Amsterdam ee Airport wareegaan 5 saacadood markii jeer garoonka sugidda ayaa la tixgeliyaa.
Tabobaro From Brussels si Amsterdam Time – 1:50 h
Ku socda ka soo Brussels si Lyon
Safarku wuxuu ka Brussels si Lyon qaadataa qiyaastii 3:30 h. Habka ugu dhaqsiyaha badan ee gaadiidka ayaa la safraya tareen, tareenada noqnoqda toos yimaada Lyon maalintii oo dhan. Duulimaadyada ka Brussels si Lyon qaado yar 6 saacadood marka gaadiidka garoonka diyaaradaha iyo jeer sugaan waxaa ka mid ah.
Tabobaro From Brussels si Lyon Time – 3:29 h
Ku socda ka soo Brussels si Frankfurt
Waxay qaadataa in ka badan 3 saacadood inay ku socdaalaan tareenka ka Brussels si Frankfurt. tareenada Direct timaado Frankfurt inta badan maalintii oo dhan. In la barbardhigo, duulimaadyo ka Brussels si Frankfurt wareegaan 5 saacadood markii wakhtigii gaadiidka garoonka diyaaradaha waxaa la tixgeliyaa.
Tabobaro From Brussels si Frankfurt Time – 3:05 h
Waa maxay qaabka ugu dhaqsiyaha badnaa ee safarka ee France:
Yaa ma jecla France? Waxaan ku qoran blogs xad-dhaaf ah oo ku saabsan meelaha ugu fiican ee France. From talooyin ah ee ku safraya tareen ka Paris si ay u Nice si Halkee aad awoodid heli shiilan ugu fiican Faransiiska ee France ama maqaayado Michelinguiden Star ee France haddii aad doorbidayso. asal ahaan, aad qeybiso doonaya in ay halkaas ka heli sida ugu dhaqsaha badan! Qaabka ugu dhakhsaha badan ay halkaas ka heli? By tareen dabcan!
Tareen safarka ee France waa habka ugu fiican ee ka soo Paris magaalooyinka kale ee France. Safarka ka Paris xagga koonfureed oo dalka France-inkastoo xoogaa SLT-waxaa sida ugu wanaagsan sameeyo tareen; qiimaha diyaarad iyo tareenka waa caadi ahaan u dhigma, laakiin safarka tareenka waa wax badan ka yar ee kaaftoomi a.
Iyadoo bas safar ama koro-share waa ka jaban, xaddiga saacadaha qaadan lahaa waa kaliya aan wax ku ool ah. hab ugu dhakhsaha badan ee safarka Yurub had iyo jeer waa tareen, iyo helitaanka agagaarka France waa ka duwan yahay no!
Halkan waxaa ku qoran tusaale oo mar lagu badbaadinayo:
Safarku wuxuu ka Amsterdam in Paris ee lagu dhammaystiri karaa qiyaas ahaan 3.5 saacadood. hab ugu dhakhsaha badan ee safarka waa a tareenka-xawaaraha sare, tareenada soo noqnoqda si toos ah uu yimid Amsterdam Centraal Station maalintii oo dhan. Duulimaadyada ka Paris’ Charles Airport Gaulle de si Airport Schiphol Amsterdam ee qaado qiyaas ahaan 4 saacadood markii jeer terminal sugidda waxaa loo tixgeliyaa.
Tabobaro From Amsterdam in Paris Time – 3:26 h
Ku socda ka soo London in Paris
Waxaad buuxin kartaa safarka ka dhexeeya boqortooyada Ingiriiska iyo caasimadaha Faransiis in yar ka badan 2 saacadood. hab ugu dhakhsaha badan ee safarka waa tareenka-xawaaraha sare ee ka St a. Pancras Station. Waxaad ka heli doontaa tareenada noqnoqda toos yimaada Paris’ Gare du Nord maalintii oo dhan. duulimaadyada ka London in Paris qaataan qiyaastii 4 saacadood markii jeer garoonka sugidda waxaa loo tixgeliyaa.
Tabobaro From London in Paris Time – 2:16 h
Waa maxay qaabka ugu dhaqsiyaha badnaa ee safarka ee Netherlands ayaa:
Tareen safarka waa habka ugu wanaagsan ee gaadiidka si aad u hesho mid ka mid ah magaalada si kale Nederland. Qiimaha waa qaali ahayn sida aad u qabsan kartaa tigidh internetka ee Save A tareenka ka Amsterdam si Rotterdam ee ku saabsan 15 euros iyo Amsterdam si Hague (Den Haag Dhexe) ku dhowaad 11 euros.
Ku socda ka soo Amsterdam si Dusseldorf by tareenka:
Waxay qaadataa qiyaas ahaan 2 saacadood in ay u safraan inta u dhaxaysa Amsterdam Dusseldorf tareen. tareenada noqnoqda toos yimaadaan Amsterdam saldhigga Dhexe ee maalintii oo dhan. Duulimaadyada ka Dusseldorf in Airport Schiphol Amsterdam ee ay ula wareegaan 3 saacadood.
Tabobaro From Amsterdam si Dusseldorf Time – 2:13 h
Numbers been ma! waqtiga la isu hadleen! hab ugu dhakhsaha badan ee safarka ee Europe waa in Tareenku. Madax ka badan in our Save the website A tareenka si aad u ogaato qiimaha ugu fiican, in ilbiriqsi!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/quickest-mode-travel-europe/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#airtravel #duulaya #hab safarka Eurostar trainjourney tareen safarka safarka tareenka
Belgium safarka tareenka, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, safarka tareenka Spain, safarka Europe
safarka tareenka Scotland, safarka Europe
safarka tareenka, safarka tareenka Britain, safarka tareenka France, safarka tareen UK, safarka Europe